WWE 5 nguva huru kubva kuna John Cena Vs AJ Styles - Wwe
WWE Rivalry rewind: 5 hombe nguva kubva kuna John Cena Vs AJ Styles.
WWE yakaunza nguva nyowani yepro wrestling muna2016.Chigadzirwa chavo chakapfuura neshanduko dzinoverengeka dzakakosha panguva ino. Iyo kambani zvakare yakadzorera iyo Brand Split, iyo yakapa RAW uye SmackDown nemazita avo akapatsanurwa.
Chinangwa cheWWE chekuburitsa chinonakidza chigadzirwa chakatungamira kune vakawanda vasina kumboona-pamberi pemakwikwi. Kumwe kukwikwidzana kwakadai kwekurota kwakaitika pakati paJohn Cena naAJ Styles.
Iyo feud yakatanga pamberi peMITB 2016 pay-per-maonero uye ndokuenderera kwemwedzi minomwe inotevera. Iwo ma superstars maviri, zvinoshamisa, akagovana zvisingaiti kemisitiri. Vakaunza zvakanakisa kubva kune mumwe nemumwe nguva imwe neimwe.
Ndasuwa 2016 WWE #WWERaw #SmackDown #BeatUpJohnCena pic.twitter.com/UeLefREyhB
- jonny tran (@ JonnyLeTran6) Zvita 11, 2020
Hunhu kusimudzira, kuita-mhete chiito uye basa rekusimudzira panguva iyi yekukakavara zvaingova zvisina kana mhosva. Yakanga iri basa-kutsanangura kukwikwidza kune ese ari maviri mashura. Ngatiburukei pasi ndangariro nzira kuti tifarire iyi iconic yeWWE feud.
Muchikamu chino, ngatitarisei panguva shanu dzisingakanganwike kubva kuJohn Cena Vs AJ Styles kukwikwidza.
# 5. AJ Maitiro anotendeuka chitsitsinho pana John Cena: WWE RAW
Cena ichirova Zvitaera zvine shanu pfumbu shuffle
John Cena akaita kudzoka kwakamirirwa kwazvo kuWWE RAW muna Chivabvu 2016, mushure mekuita zvekuita kwemwedzi. Akataura nezvenguva nyowani yeWWE uye akabvunza kuomarara kwesupstars nyowani.
Mushure mekusimudzira kwaCena, AJ Styles akaita nzira yake kuringi. Akaudza Mutambi weFranchise nezvechishuwo chake chenguva refu chekugovana mhete naye. Iwo ma superstars maviri akakwazisana maoko mushure mechiratidzo chekuremekedzana.
Imi mose munorangarira hashtag #BeatUpJohnCena ? pic.twitter.com/5ddCCOyn7O
- Haasi chaiye Karl Anderson (@Karl_AndersonBC) Gunyana 17, 2018
Nekudaro, ivo vakakurumidza kuvhiringidzwa neaimbove vaaitamba navo AJ Gallows naAnderson (Iyo Kirabhu). Nekuda kwekumwe kupokana kwemukati, Masitayera akasarudza kuzviparadzanisa nevamwe vake. Izvo hazvina kugara zvakanaka naGallows naAnderson, avo zvino vaitarisa kurova vese AJ naCena.
Iye Anoshamisa anonyepedzera kubatana pamwe naCena. Nekudaro, Masitaera akakurumidza kuratidza ake echokwadi mavara nekurwisa iye waaibata naye. Chikwata chakabatanawo naye mukurova uku. Yaive imwe yeakanyanya kuurayiwa chitsitsinho kutendeuka nguva dzese.
Izvo zvakadzosa kuenderana neAJ Styles, uyo akange arasika mukushushikana mushure mekurasikirwa kwakateedzana kuRome Reigns. Yakapawo John Cena muvengi akaomarara wekutarisana naye. Zvakare, chikamu ichi chakaunza nyika kune yakakurumbira #BeatUpJohnCena maitiro.
10 zviratidzo uri kuita zvakanaka muhupenyu
maitiro ekuudza kana urikushandiswa
nzira yekupfuura sei kumunhu akasindimara
kutora zororo kubva pahukama kuti uzviwane iwe
kutaura sei kana musikana achindida
unoziva sei kuti hukama hwako hwapera